Iindaba - Kutheni Iimpawu ze-LED zangaphandle zibaluleke kangaka
Ileta yeJelo le-LED
Iileta zesitayile esingasemva
Iileta ezingaphambili kunye neziKhanyiswa ngasemva
Iileta zesiteshi ezikhanyiswe ngaphambili
Iileta zeShaneli ezingakhanyiswanga
Flexible Umqondiso weNeon
Uphawu lweglasi yeNeon
Umqondiso weSiganeko somtshato
Isibonakaliso seBhalbhu ze-LED
Kutheni Iimpawu ze-LED zangaphandle zibaluleke kangaka
Iimpawu ezikhokelwa ngaphandle azikho nje kwindlela esihamba ngayo, ziphakathi ekukhuthazeni ishishini lakho. Ukuba ungumnini wesitali esincinci, lelo lishishini lakho kwaye kubaluleke kakhulu ukuba ubambe ingqalelo yabathengi abanokubakho. Njengoko siphila kweli xesha langoku, iintsuku zemiqondiso ebhalwe ngesandla kudala zadlula. Abantu basazisebenzisa kodwa abasenamtsalane. Okwangoku, uzibuza ukuba kufuneka uthenge imiqondiso ekhokelwe ngaphandle? Siza kunika izizathu ezi-5 zokuba kutheni kufuneka utyale imali yakho kwizibane zangaphandle ezikhokelwayo.
Ubungakanani beleta, ekwabizwa ngokuba kukuphakama kweeleta, yeyona nto ichazayo ukuba umyalezo wakho unokufundwa kude kangakanani ngumntu onamehlo aphakathi. Ukufumana oku kungalunganga kuya kukhokelela ekubeni unobumba wakho ube mncinci kakhulu ukuba ungafundeka okanye ube mkhulu kakhulu. Oku kuchaphazela kakhulu umgangatho wophawu lwakho kwaye kukusebenza ngokufanelekileyo ukusasaza umyalezo.
I-Duden ihamba ngendawo yayo kwaye iyibonelela nge-regelialia eyimfuneko. Lilizwe eliyiparadesi, apho iinxalenye ezigcadiweyo zezivakalisi ziphaphazela zingene emlonyeni wakho.
Esinye isizathu sokusebenzisa imiqondiso ekhokelwa ngaphandle kukuba ziyakhanya kwaye zinomtsalane kubantu abaninzi nangexesha lokucotha. Ukuba ishishini lakho lingaphandle, ke olu khetho lufanelekileyo kwishishini lakho. Ayisiyiyo le miqondiso kuphela eqaqambileyo kodwa iyacaca. Oku kuthetha ukuba wenza kube lula kubathengi bakho ukuba babone into oyibonisayo kwaye baya kuza kuwe.
Ixesha Post: Aug-09-2020
Umgangatho Wesithathu, uNombolo 499-951 Baqi Rd, iShii City, kwiPhondo laseFujian, China
Uyithengisa njani indlela yakho ukuphuma kwishishini
Amandla eempawu zangaphandle ze-LED
Nceda uthumele isincamathiselo sesicelo sokukhuphela kwiCDR, AI, EPS okanye kwifomathi yePDF.
Ungalibali ukufaka igama lomntu onxibelelana naye,
igama lenkampani, idilesi yenkampani kunye nenombolo yomnxeba.
Isikhokelo - iveliso ezifakiwe - Imephu yendawo